Diyopost.com :: वेल्जियम भर्सेज फ्रान्सः 'काउन्टर एट्याक' दुबै टिमको बलियो पक्ष, यस्तो छ संभावित लाईन अप ! वेल्जियम भर्सेज फ्रान्सः 'काउन्टर एट्याक' दुबै टिमको बलियो पक्ष, यस्तो छ संभावित लाईन अप ! - Diyopost.com
काठमाडौँ । रसियामा जारी विश्वकप २०१८ मा आजबाट सेमिफाईनलका खेलहरु शूरु हुँदै छ । रसियाको सेन्ट पिटरवग्र्स स्टेडियमा नेपाली समयअनुसार आज राति ११ः४५ मा फ्रान्स र वेल्जियम खेल्दै छन । अहिले सम्मको अपराजित यात्रा तय गर्दै आएका दुबै टिमको लागी आजको खेल महत्वपुर्ण हुनेछ ।
समुह चरणमा अस्ट्रेलिया र पेरुलाई पराजित गरेको फ्रान्सले डेन्मार्क संग भने ०–० को बराबरी खेल खेलेको छ । नकआउट चरणमा आईसक्दा फ्रान्सले डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्र्जेन्टिनालाई ४–३ को नमिठो हार चखाएको थियो । सेमिफाईनल सम्म आईपुग्दा उरुग्वे २–० ले पराजित भएको भयो । फ्रान्सलाई सेपिमफाईनल सम्मको यात्रा सम्म ल्याउनको लागी पिएसजीका किशोर खेलाडी किलियन एमवाप्पेले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका छन । अर्जेन्टिना संगको खेलमा एमवाप्पेले व्यक्तिगत २ गोल गरेका थिए । उरुग्वे विरुद्धका खेलमा भने गोल गर्नबाट चुकेका थिए । त्यस्तै गोलकिपर ह्युगो ल्हरिस र रक्षापंक्तिमा खम्बाको रुपमा लुकास हर्नान्डेज र स्यामुयल उम्टिटीले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेका थिए ।
म्यानचेष्टर युनाईटेडका खतरनाक खेलाडी मानिने पाउल पोग्वा र यूभेन्टसबाट व्यवसायिक खेल खेल्दै आएका प्रभावशाली खेलाडी व्लेज म्याट्विडीबिचको गतिलो तालमेल पनि सेमिफाईनल सम्म आईपुग्नुको प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ । फरवार्डमा एम्वाप्पे संगै एट्लेटिको मड्रिडका स्टार स्ट्राईकर एन्टोन ग्रिजम्यान र आर्सनलका ओलिभर जिराउड रहनेछन । सेमिफाईनल खेलको सम्भावित लाईन अपमा ह्युगो ल्हरिस, वेन्जामिन पाभार्ड, रफाईल भेरेन,सामुयल उम्टिटी, लुकास हर्नान्डेज, पाउल पोग्वा, एनगोलो कान्टे, किलियन एम्वाप्पे, एन्टोन ग्रिजम्यान र ओलिभर रहेका छन । अर्का मिडफिल्डर कोरेन्टिन टलिस्सो व्लेज म्याट्विडीसंग सव्सटिच्यूटमा मैदान प्रवेश गर्ने छन ।
फ्रान्सलाई पराजित गरि नयाँ ईतिहास कोर्ने लक्ष्यमा रहेको वेल्जियम पनि यतिखेर मज्वुत अवस्थामा रहेको छ । समुह चरणमा पनामा, ट्युनिसिया र इंग्ल्याण्डलाई पराजित गर्दै समुह विजेता बनेको वेल्जियमले नक आउट चरणमा जापान संग ३–२ को जित हाँसिल गरेको थियो । त्यस्तै क्वाटरफाइनलमा पाँच पटक सम्मको विश्वकप विजेता ब्राजिललाई २–१ को अन्तरले पराजित गरेको थियो । यहाँ सम्मको यात्रा तय गर्नका लागी वेल्जियमका आक्रमक स्ट्राईकर रोमेलु लुकाकुले महत्वपुर्ण खेल प्रदर्शन गरेका छन ।
उनको उत्कृष्ठ पास, र एट्याकले नै वेल्जियमलाई सेमिफाईनल सम्म ल्याएको देखिन्छ । विश्वकप फुटबलको ईतिहास हेर्दा वेल्जियम धेरै पटक समुह चरणबाट घर फर्कनु परेको छ । २०१८ को विश्वकप भने वेल्जियमको लागी एक उत्कृष्ठ मौकाको रुपमा देखिएको छ । फ्रांन्सको चुनौति सामना गर्नको लागी वेल्जियमा पनि उत्कृष्ठ गोलकिपर देखि फरवार्डसम्म राम्रो तालमेल देखिन्छ । सेमिफाईनल खेलमा गोलकिपर थिवाउट कोर्टोइस नै रहने छन । रक्षापंक्तिमा टबि एल्डरवाएल्र्ड, विनसेन्ट कम्पानी, जान भर्टोगेन गरि तिन जना खेल्ने छन । त्यस्तै मिडफिल्डमा नासिर चाड्ली, मारुएन फेलानी, यक्सेल विट्सल, क्यारेस्को, डि ब्रुएना र एडेन ह्याजर्ड खेल्ने छन भने रोमेलु लुकाकु स्ट्राईक मा रहने छन ।
दुबै टिमको काउन्टर एट्याक एक बलियो पक्षको रुपमा देखिएको छ । आजको खेल जित्नको लागी दुबै टिमको रक्षापक्ति बलियो हुन अत्यन्त आवश्यक रहेको छ ।